सिद्धान्त र शक्ति ध्वस्त पारेर अहमको मुठी उचाल्दै नेताहरूः कुन समूहले कम्युनिष्टको नेतृत्व गर्ने होला ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
सिद्धान्त र शक्ति ध्वस्त पारेर अहमको मुठी उचाल्दै नेताहरूः कुन समूहले कम्युनिष्टको नेतृत्व गर्ने होला ?
२०७८ बैशाख १०, शुक्रबार १९:४३:००
नेपालमा ७२ वर्षयता कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनेकौं उतार–चढाव ब्यहोरेको छ । यो अन्तरालमा विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा एसियाकै दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्दै लगभग दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्नसमेत सफल भयो ।
नेताहरूबीचको शक्ति र सत्ताको खिचातानी र अहमका कारण सो पार्टी धेरै दिन टिक्न सकेन । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा एमालेका लगभग आधा शतक सँगै हिँडेका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच भएको वार्ता उही अहमका कारण सफल नभएपछि दुवैतर्फका नेता–कार्यकर्ता निरास बन्न पुगेका छन् । ७२ औं कम्युनिष्ट दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली, माधव नेपाल तथा प्रचण्ड नेतृत्वका समूहहरू लागेर सिद्धान्त र शक्ति ध्वस्त पार्दै छट्पटाइरहेका छन् ।
अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धान्त र शक्ति गुमाएर सबैभन्दा कमजोर बन्न पुगेको छ । कम्युनिष्टका तीन समूहको नेतृत्व गरेका ओली, नेपाल र प्रचण्ड सबै अहिले अस्तित्वको संकटमा पर्न गएका छन् । यी तीनै समूह एक हुँदा लगभग दुई तिहाई जनमत हात पार्न सफल भए । अहिले कम्युनिष्टको सरकार त छ तर सिद्धान्त ध्वस्त भइसकेको छ, सम्मान गुमाइसकेको छ, संविधान नै ध्वस्त पार्न मरिमेटेर लागेका केपी ओलीले जनताको त के कुरा भयो र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको पनि सम्मान पाउने अवस्था गुमाउँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली जुनसुकै शक्ति लगाएर भए पनि आफ्नो समूहलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छन् ।
संविधानविपरीत संसद् विघटन र अन्य कार्यप्रति सशक्त विरोध गर्ने नेताहरूलाई सिध्याउने र अरू कार्यकर्तालाई फकाएर आफू बलियो बन्ने रणनीतिमा छन् । उनी अहिले यस्तो अवस्थामा छन् कि जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर होस्, माधव नेपाल पक्षका लिवरल नेतालाई आफूतिर तानेर होस् वा माओवादीका दोस्रो–तेस्रो तहका नेतालाई आफूतिर तानेर होस् सकेसम्म देशको पूरै राजनीति आफ्नै हातमा घुमाइरहेका छन् । अहिले देशको पूरै राजनीति उनको हातमा छ तर विपक्षी दल तथा समूह एक भएर उनको रणनीतिलाई चिर्न सके राजनीतिक रूपमा शून्यमा पुग्न कुनै समय लाग्नेछैन ।
केपी ओलीले आफ्नै अहमका कारण जनसम्मान गुमाएकाले उनले बनाउन चाहेको कम्युनिष्ट शक्तिले जनसमर्थन पाउन कठिन छ । ओली अहिले केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनसमर्थन आफूतिर एकोहोर्याउन सकिन्छ भन्नेमा छन् । अर्को, आफ्ना विरोधी माधव–झलनाथ समूहका जनतामा आशा जगाएका सशक्त नेताहरू र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेतालाई सकेसम्म कमजोर पार्न सके आफ्नो शक्तिलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने भ्रममा छन् । उता त्यति ठूलो क्षति नभई ओलीबाट अलग भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले रक्षात्मक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
आमचुनावमा आफ्नो समूहको ठूलो जित हात पार्ने र ठूलो पार्टीको अध्यक्ष तथा केही समय कुरेर प्रधामन्त्री बन्ने दाउमा ओली नेतृत्वको एमालेसँग एकीकरण गर्न पुगेका प्रचण्ड आफ्नो योजना पूरा नहुने भएपछि छट्पटाइरहे । ओली कदमपछि माधव नेपाल समूहसहित अलग भए तर अहिले एकातिर नेपाल समूह अलग भयो अर्कातिर ओलीको खेदाइ सहन गर्न कठिन परिरहेको छ । सो समूहले कम्युनिष्ट शक्तिको नेतृत्व गर्न कठिन छ ।
माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षसँगको लगातारको पेलान् र खटपटका कारण छट्पटाइरहेका बेला ओलीले संसद् विघटनको कदम चाल्न पुगे ।
सो समूहले नेकपाको ठूलै समूह सँगै भएकाले आफूले आधिकारिकता पाइन्छ जसले गर्दा शक्ति बचिरहन्छ भन्ने आकलन गरेको थियो । सर्वोच्चको अर्को फैसलाले माओवादीसँग बस्दा सांसद पद नै धरापमा पर्ने भएपछि बाध्य भएर ओलीतिरै फर्कने निधो गर्यो । अहिले ओलीको सबैभन्दा दुस्मन यही समूह बन्न पुगेको छ । यो समूहमा बौद्धिक र सम्भावना भएका नेता भए पनि सशक्त र दह्रो नीति लिएर अगाडि बढ्न सधै हच्कने गरेकाले कम्युनिष्टको नेतृत्व लिन कठिनै छ ।
हुन त ओली–नेपालबीच दुई दिन वार्ता भयो तर ओलीले आफ्नो अहमबाट टसमस भएनन् । नेपाल आफ्नो अस्तित्व नै नरहने अवस्था आएपछि ओलीको कुरामा कसरी सहमत बनून् ? एक त नेपालका कम्युनिष्ट समूहहरू भनाइमा सिद्धान्त तर सबैभन्दा दलाल पुँजीवादमा रमाउँदै आएका हुन् । केन्द्र बलियो र पूर्ण लोकतन्त्र हुनुपर्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तविरुद्ध अरूको अस्तित्व नै सहन सक्दैनन् । दोस्रो–तेस्रो तहका सम्भावना भएका नेताहरूलाई अझ सशक्त र नेतृत्व लिनसक्ने अवस्थामा पुरयाउनुको सट्टा सकेसम्म अगाडि बढ्न नदिने गरिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक कम्युनिष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्नेहरू कति दुखित भएका होलान् ? अनुमान गर्न गाह्रो छ।